यस्तो पनि: ७९ पाउण्डको खाना, १ हजार पाउण्ड टिप्स ! - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो पनि: ७९ पाउण्डको खाना, १ हजार पाउण्ड टिप्स !
पोर्टा डाउन, उत्तरी आयरल्याण्डको एउटा रेष्टुरेण्टमा एक जना ग्राहकले दिएको टिप्स यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चित बनेको छ ।
पोर्टा डाउनमा रहेको भारतीय रेष्टुरेण्टमा खाना खाएपछि खुशी भएका एकजना ग्राहकले होटलका शेफ शब्बीर सत्तारलाई बोलाएर एक हजार पाउण्ड टिप्स दिएका थिए । अचम्म त के छ भने ग्राहकको आफ्नो बिल भने जम्मा ७९ पाउण्ड मात्रै थियो ।
याे पनि पढ्नुस चितामा आगो लगाउनै खोज्दा लासको टाउको हल्लिएपछि, त्यसपछि भयो यस्तो विचित्र घटना
गत मंगलबार ती ग्राहकले शब्बीरलाई बोलाएर खानाको प्रशंसा गर्दै शानदार खानाका लागि सर्भिस फिस दिएको बताए ।
रेष्टुरेण्टका मालिका लुना एकुसले रेष्टुरेण्टकै इतिहासमा यति सम्मान पहिलोपटक पाएको जनाएका छन् । उनले पाइएको टिप्स होटलमा काम गर्ने सबैमा दामासाहीले बाँडिने बताए ।
याे पनि पढ्नुस के तपाईलाई थाहा छ- संसारको सबैभन्दा महंगो कफी बिरालोको दिसाबाट बनाइन्छ
ट्याग्स: Tips news, Weired News